Pasi Rose - Voice of America
Ndira 26, 2022
Zimbabwe yakurudzirwa nenyika dzepasi rese kusaina zvisungo zveUnited Nations zvinorambidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kutochwa pamwe nekudzikisira hupenyu hwevanhu. Izvi zvabuda pamusangano weUniversal Periodic Review waitwa nhasi kuGeneva, Switzerland.
Ndira 05, 2022
France Yowana Imwe Mhando yeCovid-19 Asi WHO Ichiti Vanhu Vasanyanye Kutya Havo
France inoti yakawana imwe mhando itsva yeCovid-19 inonzi IHU iyo ichiri kuongororwa hayo kuti inokonzera hurwere hwakaita sei navanamazvikokota munya dzezvirwere.
Zvita 25, 2021
Vanhu Vakawanda Vanoti Zuva reKisimusi Ranga Rakafanana neMamwe Mazuva
Zuva reKisimusi rasvika rikadarika semamwe mazuva vakawanda munyika vachiti vatadza kuita mhemberero sezvavange vakaratirisa nezvikonzero zvinosanganisira kushaya mari pamwe nekutyira kutapurirwa denda reCovid-19.
Sangano reFifa raudza Sport and Recreation Commission kuti idzore bhodhi reZifa rayakadzinga, kutadza kwayo kuita izvi, yotorerwa matanho makukutu
Zuva reKodzero Rinosvika Zvinhu Zvisina Kumira Zvakanaka muZimbabwe
Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu, kana kuti International Human Rights Day, nyanzvi munyaya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021, uye izvi zvakawedzerwa nekuvapo kwedenda reCovid-19.
Zimbabwe Inocherechedza Zuva reInternational Anti Corruption Day
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekurwisa huori kana kuti International Anti-Corruption Day, komisheni inoona nezvehuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) ichichema chema nekusavapo kwemitemo yakakwana yekurwisa huori.
Zimbabwe Inobatana neNyika dzePasi Rose Mukucherechedza World AIDS DAY
Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day paine kurudziro yekupedza chirwere cheHIV/AIDS panosvika gore ra2030.
Vanhu Vakawanda Vanobatwa neChirwere cheCovid-19 paMasvingo Teachers College
Vanhu makumi manomwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 paMasvingo Teachers College nezuro, uye vamwe vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi mudunhu rose reMasvingo.
IMF Inoti Haisi Kuzokweretesa Zimbabwe Imwe Mari Kudzamara Yabhadhara Zvimwe Zvikwereti
Bhanga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti harisi kuzokweretesa Zimbabwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda kunze zvairi kukundikana kubhadhara.